FLASH ကိုဆရာဝန်အခမဲ့ DOWNLOAD 1.4.1 - PROGRAM ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - 2019
D-ဖျ Flash ကိုဆရာဝန် 1.4.1
အစီအစဉ် D-ဖျ Flash ကိုဆရာဝန် ဒါဟာ hard drive တွေနဲ့ flash-drives တွေကိုအတူလုပ်ကိုင်များအတွက်စုစုပေါင်း software ကိုအထုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ low-level format ကိုသုံးပြီး drives တွေကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးနှင့် restore နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကို flash card ကိုအပေါ်ဖန်တီးစံချိန်ပုံရိပ်တွေအပြင်, D-ဖျ Flash ကိုဆရာဝန် "enclosing" function ကို။
ကျနော်တို့နာလန်ထူ flash drive ကိုအခြားအစီအစဉ်များကိုကြည့်ရှုအကြံပြု
အချို့ကြိုးပမ်းမှုများကဏ္ဍထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးနောက်သင်ကျိုးပဲ့ကဏ္ဍကိုဖတ်ရှုခြင်းရှိမရှိ, အလျင်ကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်ပုံစံပါလိမ့်မည်ကိုမည်သို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်အပြင်အဆင်နှင့်ကြိုးစားမှုကိုဖတ်ရှုခြင်း၏နံပါတ်ခုနှစ်တွင်သောက "မကောင်းတဲ့။ "
အမှားအယွင်းများဘို့စကင် function ကိုမောင်းပြဿနာကဏ္ဍဖော်ပြသည်။
low-level format နဲ့သုံးပြီး program ကို, မတတ်နိုင်သော flash ကို-drives တွေကိုနှင့် hard drive တွေပြုပြင်။
မီဒီယာပေါ်မှာရှိသမျှသတင်းအချက်အလက်များတစ် drive ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါဒါအလွန်သတိထားပါ, ဖကျြဆီးခံရပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါအစီအစဉ်ကို D-ဖျ Flash ကိုဆရာဝန်မီဒီယာပုံရိပ်တွေဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ပုံရိပ်တွေ format တစ်ခုဖန်တီးနေကြတယ် .img ထိုသို့အစီအစဉ်ကိုကိုယ်တိုင်ကမသာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပေမယ့်ကိုလည်းစံမှတ်တမ်းတင်အတွက် Windows ကပုံရိပ်တွေကိုဆိုလိုသည်နိုင်ပါသည်။
created the ပုံရိပ်တွေကို flash-based drives တွေကိုအပေါ်သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။
D-ဖျ Flash ကိုဆရာဝန်၏အကျိုးကျေးဇူးများ
2. တစ်ဦးကို USB drive ပေါ်တွင်ရုပ်ပုံများကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့စွမ်းရည်
Cons D-ဖျ Flash ကိုဆရာဝန်
1. သတင်းအချက်အလက်မျှ drive ကိုစာတစ်စောင်ကိုမဖျက်ပစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတိပေးဒိုင်ယာလော့ခ် box ထဲမှာ။ အဲဒါကိုအသေအချာပြင်ဆင်ထားသောအရာများအဘို့ရွေးချယ်ရေး drive ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်သောကြောင်းအောက်ပါအတိုင်း။
2. မည်သို့ပင်သင်စစ်ဆင်ရေးသို့မဟုတ်မလုပ်ဆောင်ပေးဖို့ငြင်းဆန်ခဲ့ကြခြင်းရှိမရှိ, ဤဝင်းဒိုးကိုပုံပေါ်:
D-ဖျ Flash ကိုဆရာဝန် - တစ်ဦးကို flash card ကိုအပေါ်မှတ်တမ်းတင်ပုံရိပ်များ၎င်း၏လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်အ function ကိုကိုင်တွယ်ခံရပ်သွားသော program တစ်ခုအလားတူ utilities ၏နံပါတ်ကနေသတ်မှတ်ရန်။
device ကိုဆရာဝန် Rising PC ကိုဆရာဝန် soft စည်းရုံးရေးမှူး တုတ်၏ပွနျလညျထူထောငျဘို့အစီအစဉ်ကို
D-ဖျ Flash ကိုဆရာဝန် - software ကိုပျက်ကွက်သဖြင့်ပျက်စီးသည့် USB-drives တွေကိုပြန်လည်ထူထောင်များအတွက်အသုံးဝင်သော tool ကို။ အဆိုပါထုတ်ကုန်ဒေတာကို backup လုပ်ထားအတှကျအသုံးပွုနိုငျသညျ။
ရေးသားသူ: အခြောက်လှန်း Software များ
ဗီဒီယို Watch: Chapter4Exercise Quadratic equations maths class 10 NCERT in English or Hindi (နိုဝင်ဘာလ 2019).